Fitiliana tsimokaretina: 11 ny tranga vaovao, tafakatra 57 ireo tratry ny coronavirus | NewsMada
Nanomboka, omaly ny fitliana an-kalamanjana amin’ny alalan’ny fitaovana haingam-piasa (TDR). Nisy ny natao teny amin’ny CCI Ivato ary teo koa ny natao teny Ankorondrano. Vokany, fito ireo tranga vaovao, niampy efatra vaovao hafa ka nahatonga ny isan’ireo tratran’ity valanaretina ity ho 57.
Nitatitra ny vokatry ny fitliana tamin’ny alalan’ny TDR ny filoha Rajoelina. « 731 ireo mpandeha vita fitiliana. Mitondra ny tsimoka’aretina ny efatra tety amin’ny CCI Ivato raha iray kosa no mitondra coronavirus teny amin’ny Jumbo score, Ankorondrano. Manampy ireo ny olona roa nantoka-monina teny amin’ny Cnaps Vontovorona sy ny tany an-tokantranony », hoy izy. Fito izany ireo tranga vaovao, miampy ny efatra teny amin’ny Intsitut Pasteur (IPM), raha 46 ny isan’ireo tratry ny Coronavirus, afakomaly.
Esorina sy sasana ny akanjo
Notsiahivin’ny filoha fa efa nanao ny fiarovana sy ny fepetra rehetra ireo mapndeha avy any ivelany ireo ka natao an-kalamanjana ny fitiliana. « Tsy misy atahorana izy ireo ary efa nafarana fa esorina ary havoaka ao an-trano sy sasana ny akanjo manoloana ny mety hifam­pikasohana na ny fifindran’ny mikraoba », hoy ihany izy. Nanteriny fa nihazakazaka be ny fitliana taorian’ny nahazoana ilay fitaovana TDR ka nahavitana mpandeha miisa 588 hafa tany an-tokatranony sy teny Vontovorona. « Betsaka ireo raha 150 ihany no vita fitiliana teo aloha », hoy ny filoham-pirenena.
Niverina nody eny amin’ny fiaraha-monina
Na izany aza anefa, nahazo marim-panamarinana (certificat) manokana ireo notiliana, tsy nahitana tranga covid-19 ary miverina eny anivon’ny fiaraha monina. Mila mitandrina hatrany izy ireo araka ny nambaran’ny eo anivon’ny Foibe fibai­koana ny ady atao amin’ny covid-19 (CCO) Ivato sy ny filoha Rajoelina.
Hitohy anio ny fitliana eny an-kalamanjana ka hatao eny Ankorondrano ny an’ireo mpandeha tonga ny 18 marsa. « Tapitra ny 15 andro nitokan’izy ireo monina koa tokony ho tonga eny an-toerana ny tolakandro miaraka amin’ny pasipaoro », hoy ny filoha. Eny amin’ny CCI Ivato, anio tontolo andro kosa ho an’ireo mpandeha tonga tamin’ny zotra ny 16 sy 17 marsa.
Fanafodin’ny coronavirus ny fijanonana ao an-trano
Hotanterahina ny 2 avrily kosa indray eny amin’ny CCI Ivato ny fitiliana ho an’ireo tonga ny 19 marsa, mandritra ny tontolo andro. Nambaran’ny filoha fa afaka mandalo hatao fitiliana any amin’ny hopitaly manara-penitra ireo any amin’ny faritra.
Nantenana ny rehetra hatrany ny filoha fa hany fanafodin’ny coronavirus sady fahendrena ny fijanonana ao an-trano. « Tsy mampiditra olona ao an-trano fa samy maka fepetra fiarovana. Tena fahavalo manafika ny firenena ny coronavirus ka fanampiana antsika rehetra sy ny fitondrana ny tsy fivoahana ny trano », hoy ny filoha Rajoelina Andry.